सीताराम हाछेथु | Ratopati
ललितपुर नगर प्रहरीले खटायो ‘हातेमालो टोली’ : समस्या सुन्न हरेक टोलमा पुग्ने access_timeअसोज २६, २०७७
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर प्रहरीले नगरवासीको सेवामा ‘हातेमालो टोली’ परिचालन गरेको छ । नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुले आइतबार उक्त कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुरु गरेका हुन् । महानगर क्षेत्रभित्र दैनिक रुपमा हातेमालो टोली परिचालन ...
रविभवन दुर्घटनाको पाठ : गल्ती नभएको सवारीलाई पनि कारवाही गरिरहने कि ऐनमा संशोधन गर्ने ? access_timeबैशाख २९, २०७७
गत शुक्रबार काठमाडौंको रविभवनमा कार र मोटरसाइकल ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा मोरङको बेलबारी निवासी मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भयो । दुर्घटनापछिको सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत नै प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न कार चालकलाई शुक्रबारदेखि नै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, रविभवन दु...
ट्राफिक बत्तीले दुर्घटना कम गर्नमा सहयोग गरेको छ : सीताराम हाछेथु access_timeफागुन १७, २०७६
ट्राफिक बत्ती सञ्चालनमा आउँदा पनि ट्राफिक प्रहरीको आलोचना हुन छोडेको छैन । पहिला ट्राफिक बत्ती नहुँदा पनि ट्राफिक प्रहरीको आलोचना हुन्थ्यो । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको ११ ठाउँमा ट्राफिक बत्ती जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । झनै ट्राफिक बत्तीको कारण उपत्...
गल्ती गर्ने बाइक, क्षतिपूर्ति तिर्ने गाडी ? access_timeमाघ १०, २०७६
काठमाडौँ । बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नु अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सीमित सडकमा बढ्दो सवारी साधन व्यवस्थित गर्न चानचुने प्रयासमात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि सडक अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्नुका साथै ट्राफिक नियम...
जरिवाना बढाउँदैमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदैन access_timeपुस १३, २०७६
बढ्दो दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि राज्यले नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । चालकको लापरवाही नै दुर्घटनाको मुख्य कारकका रुपमा देखा पर्दै आएका कारण जरिवाना दर वृद्धि गर्ने दिशामा छलफल भइरहेको छ । कतिपयले सवारी नियम उल्लंघनमा जरिवाना दर बढाउनुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका...
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई सीताराम हाछेथुको १० सुझाव access_timeमंसिर ९, २०७६
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका काम कारवाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले हालै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ । यसै क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन गरिएको छ । रघुवीर महासेठको स्थानमा बसन्तकुमार नेम्वाङले उक्त मन्त्...
नौविसे–नागढुङ्गा सडकखण्ड जाम घटाउन सीतारामका नौ सुझाव access_timeअसोज १०, २०७६
काठमाडौँ । नौविसे–नागढुङ्गा सडकखण्डमा लगातार चार दिनदेखि घण्टौँसम्म सवारी जाम हुने गरेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रने अधिकांश सवारीसाधन यहि नौविसे–नागढुङ्गाको मुख्य नाका प्रयोग गर्छन् । तर यो सडकमार्ग निकै अव्यवस्थित छ, जसले गर्दा अत्यधिक जा...